Naqshadaynta Musqusha Guriga Si Aad U Qurxiso Oo Xaalad Wanaagsan Ku Hayso Qubeyska Maalin Walba
Bogga ugu weyn / blog / Naqshadaynta Musqusha Guriga Si Aad U Qurxiso Oo Xaalad Wanaagsan Ku Hayso Qubeyska Maalin Walba
2021 / 01 / 11 Qoondayntablog 8403 0
Iskuulka Ganacsiga Musqusha 2020-11-23
Musqusha oo ah meel aad u badan oo loo isticmaalo maalin kasta. Naqshadeynta, haddii aadan sameynin muuqaal-muuqaal wanaagsan, waqti, sidoo kale waxaad dareemi doontaa raaxo-darro aad u daran. Marka sidee loo siiyaa musqusha si ay u noqoto mid qurux badan? Waxaan maanta idinla wadaagayaa qaar ka mid ah kiisaska nashaadaadka qolka qiimaha sare leh, waxaan rajeynayaa inaad xitaa yeelan kartaan niyad wanaagsan maalin kasta qubeyska.
Naqshadeynta midabka cawl waa mid caan ah sannadihii la soo dhaafay. Musqusha guriga waxaa hadda lagu dhajin karaa midab cawl ah oo ka sameysan marmarka dharka, oo leh alaab jilicsan oo caddaan iyo madow ah iyo agab nadaafadeed, waxay umuuqataa mid da 'yar oo deeqsi ah.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa alwaax, casaan, iwm booska cawlan sida tanneer si looga fogaado in nidaamka guud ee cawlku u muuqdo mid aad u liita qaar ka mid ah, faahfaahinta oo shaqo fiican qabata ayaa musqusha ka dhigi karta mid qurux badan.
Isku darka naqshadaha madow iyo caddaan ayaa aad ugu habboon qaabka casriga ah, qaabka ugu yar, iyo dhulka laamiga ah ee lebbiska laba-geesoodka ah waa in la ballaariyo dareenka muuqaalka ee qolka musqusha, si musqusha ay ugu ekaato mid waasac ah.
Marmarka marmarka ayaa ah xulashada milkiilayaasha guryaha intooda badan, marmarka marmarka ayaa sidoo kale ku yimaada qaabab kala duwan iyo midabbo kala duwan, kuwaas oo lagu go'aamin karo hadba doorbidkaaga. Walxaha birta sidoo kale waa lagu dari karaa si musqusha uga dhigto mid hawo badan.
Qaar ka mid ah marmarka hal-abuurka ah ee la jeexjeexay ayaa ka dhigi kara musqusha mid aad u xiiso badan, laakiin sidoo kale si looga fogaado inaadan u muuqan mid aad u jahwareersan, doorashada codka waa mid aad u muhiim ah.
Kudar dusiyeen ubaxyada xiisaha leh sida lahjadaha musqusha fudud iyo deeqsinimada leh. Ku dhajinta aagga qubayska iyo sagxadda baalasha ubax buluug-buluug ah waxay ka dhigeysaa musqusha mid suugaaneed u eg
Musqusha guud ee guriga ka jirta waxay dooran kartaa inay ka dhigto saxanka bannaanka albaabka musqusha, si ay markaas ugu fududaanto adeegsiga maalin kasta. Iyo saxanka madax-bannaan oo ka baxsan musqusha, laakiin sidoo kale wuxuu ciyaaraa saameyn qurxin.
Aagga musqusha ayaa ku filan, hadda waad awoodaa saddex naqshadood oo kala duwan. Kala saar musqusha, saxanka qubeyska iyo meesha lagu maydho, kuna dar qayb wanaagsan si musqusha uga dhigto mid qurux badan.
Ka dib markaad eegto kiisaskan naqshada musqusha, ma inaad ka heshaa midka aad ugu jeceshahay? Waxaan u maleynayaa in qaabeynta musqusha lagu go'aamin karo iyadoo loo eegayo qaabka guriga, tusaale ahaan, midabka cawl ee musqusha ayaa aad ugu habboon qaabka ugu yar iyo kan Scandinavia. Naqshadeynta laamiga marmarka ayaa ku habboon qaabka casriga ah iyo kan Yurub. Raac qaabka u ma dhigi doono musqusha mid aad u kadis ah.
Hore:: Sidee Loo Sameeyaa Haddii Qubayska Mar Kale La Xayiro? Ha degdegin! U Adeegso Si Aad uqubato… Mucjiso! Ku Degdeg Si Aad Ugu Sheegto Macaamiishaada! Next: Jiilaal baa halkan jooga! Miyaan Iibsadaa Qubeys Heer-kulka? Dhageyso Khubarada, Layaab Ma Leh Inta Dad Badan Doonayaan Inay Waxka Beddelaan !!!